किन कपाल कपाल हुने - सेभ गर्ने-प्राविधिक जानकारी पछि - शेन्जेन कुनै स्मार्ट स्मार्ट निर्माण टेक्नोलोजी कम्पनी लिमिटेड
किन सेभिंग पछि कपाल गाढा छ
समय: 2020-12-23 हिट्स: 3
जो कडा कपाल संग थाहा हुन सक्छ कि केश चाँडै फेरि कपाल बढ्नेछ जब हामी कपाल हटाउन परम्परागत विधिहरु प्रयोग गर्दछौं। नयाँ कपाल मूल भन्दा गाढा र गाढा छ। यो अवस्था वास्तवमै लाजमर्दो छ।
धेरै मानिसहरू आश्चर्य गर्छन् कि किन कपाल दाह्री पछि कपाल हुन्छ। कारण यो छ कि कपालको जरा टिप्सको भन्दा मोटो हुन्छ, त्यसैले जब हामी कपाललाई जराबाट काट्छौं, कपालको मोटा बाक्लो देखिन्छ। अर्कोतर्फ, नयाँ कपालहरू कर्णको भन्दा माथि माथि बढ्दछ, जसले मानिसहरूलाई शरीरको कपाल बाक्लोपनको भावना दिन सक्छ।
परम्परागत कपाल हटाउने विधिहरूले निम्न समस्या निम्त्याउँछ:
यो तान्न पनि धेरै कष्टकर हुन्छ: प्कर्ने प्रक्रिया पीडा हो, तर के तपाईंलाई थाहा छ कपालको फुलहरू डर्मिस सेन्टीमिटरसम्म गहिरोसम्म फैलिन्छ।
मानव-निर्मित कपाल को हटाउने, यो follicles र वरिपरिको ऊतक संक्रमण, सूजन बनाउन सजिलो छ। सिद्धान्त बुझ्न सजिलो छ: जब तपाईं मूली बाहिर तान्नुहुन्छ, माटोले मूलीलाई पछ्याउँदछ, तपाईं केवल कपाल तान्न चाहनुहुन्छ र वरपरको टिशूलाई क्षति नगरी जुन असम्भव छ। थप रूपमा, हटाएपछि छिद्र र छाला एक नाजुक अवस्थामा हुन्छ, जसले छाला प्रतिरोधलाई गिरावट गर्दछ वा कपालको फोलिकल्स - पसिना ग्रंथिहरू 、 सेबेशियस ग्रन्थीहरू र संक्रमणको अन्य भागहरूमा पुर्‍याउँछ।
कपाल कणहरू सजिलैसँग प्रयोग गर्न सकिने क्रीमको प्रयोग गरेर फुल्न सकिन्छ। सामान्य अवस्थामा, कपालको फोलिकुलहरूमा ब्याक्टेरिया हुन्छन्। तिनीहरू केवल आन्द्रामा प्रोबायोटिक्स जस्ता हुन्छन्, र तिनीहरू शान्तिपूर्वक मानिसहरूसँग मिलेर जान सक्छन्। तर जब कपालको फोलिकल्स नष्ट हुन्छन् वा शरीरको प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुन्छ, शरीरमा ब्याक्टेरियाहरू तीव्र रूपमा बढ्दछन्, र निराशा पछि, बाहिरी ब्याक्टेरियाहरू छिद्रबाट प्रवेश गर्दछन्, जसले सजीलै कपालको फोलिकल्समा सूजन र सूजन लिन सक्छ।
यसले धेरै समस्या निम्त्याउने छ त्यसैले हामी सिफारिस गर्दैनौं कि तपाईं परम्परागत तरिका अनावश्यक कपाल हटाउन को लागी प्रयोग गर्नुहोस्। यद्यपि, यदि तपाई जोडदार कपालको समस्या समाधान गर्न चाहानुहुन्छ भने, यसलाई समाधान गर्ने परम्परागत तरिका मात्र होईन। अब हामी घर को उपयोग रौं हटाउने उपकरण छनौट गर्न सक्छौं, जो सुविधाजनक छ र हाम्रो शरीरलाई नोक्सान गर्दैन। यो ज्ञात छ कि घर प्रयोग कपाल हटाउने उपकरण धेरै युवा मानिसहरु लाई प्रभावित छ। साथीहरूले यसलाई प्रयोग नगरे कृपया यो प्रयास गर्नुहोस्, निश्चित रूपमा अचम्मको कुरा हुनेछ!
अघिल्लो: सौन्दर्य सैलुनमा कपाल हटाउने उपकरणहरू के के हुन्?
अर्को: जिओ नुओ तपाईको लागि शुभ समाचार ल्याउँदैछ, म तपाईको ध्यानाकर्षणको लागि भन्दै छु